Wargeyska THE GUARDIAN: 50 Ruux Oo Shacab Ah Ayaa Dhimasho & Dhaawac Ku Noqday Duqeymaha Cirka Ee Soomaaliya. – Bogga Calamada.com
Wargeyska THE GUARDIAN: 50 Ruux Oo Shacab Ah Ayaa Dhimasho & Dhaawac Ku Noqday Duqeymaha Cirka Ee Soomaaliya.
“Beeraleydu waxay fadhiyeen maqaayad shaaxa laga cabo oo ku taalla deegaanka Markii ay diyaaradu soo dulmareysay deegaanka, sidaas ayeyna ku duqeysay. Qaar ka mid ah dhibanayaashu wadada ayey marayeen, halka kuwo kalena ay gudaha maqaayadda ku cabayeen shaax casariyo ah. Shan ruux ayeyna halkaas ku dileen. Dadka ay dileen ma ahan Al-Shabaab ee waxay dilayaan dadka shacabka ah” ayuu yiri.
“Waxay ahaayeen dad isugu jira Beeraley iyo Xoola Dhaqato, ma ahayn Al-Shabaab” ayuu yiri odaygan 56 sano jirka ah ee uu soo xiganayo Wargeyska.
“Al-Shabaab waa dad la yaqaano oo hubeysan, laakiin dadkan waxay ahaayeen xubno hal qoys ah oo joogay gurigooda, mana hubeysneyn” ayey tiri. Xasan Muxumad oo ka mid ah dadka deegaanka oo isna booqday halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dhamaan dadka la beegsaday ay ahaayeen Shacab.
Dr. Xasan Sheykh Cali oo xilligaas ahaa dhaqtarka isbitaalka Kismaayo ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey dhaawacyada ilaa afar ruux oo dhamaantood ahaa xoola-dhaqato. “Waxay noo sheegeen in duqeyn lagu beegsaday tuuladooda 18-kii July taas oo sababtay dhimashada dhowr qof iyo xoolo badan” ayuu yiri dhaqtarka.
waa cadawtoyada Lagu haayo dadka muslimiintaa maxey galabsadeen dadkaa guryahooda Lagu gumaadayo